Maitiro ekutora mapikicha eJPEG neIOS 11 panzvimbo peye itsva HEIF fomati | IPhone nhau
Nekusvika kweIOS 11, Apple yakaunza mafomati maviri matsva, ese emifananidzo nemavhidhiyo, mafomati ayo Vanotibvumidza kusevha yakawanda nzvimbo pane yedu kifaa ichienzaniswa neyechinyakare JPEG / H.264. Aya mafomati matsva ekurekodha anowanikwa chete kubva ku iPhone 7, saka zvishandiso zvekare, iPhone 6s uye pasi, hazvigone kunakirwa nesarudzo iyi.
Dambudziko remafomati matsva rinoitika kana tichida share nevamwe vasina inoenderana iPhone modhi, mifananidzo mavhidhiyo atinotora. Neraki, iOS 11 inotibvumidza kuti tirambe tichishandisa echinyakare JPEG fomati pane kushandisa iyo nyowani HEIF yemifananidzo uye HEVC yemavhidhiyo.
Iyo HEIF (Yakakwira Kubudirira Image Fomati) fomati inoshandisa iyo .heic yekuwedzera, inongowirirana ne iPhone 7 zvichienda mberi neIOS 11 uye neMacs ine macOS High Sierra. Kana uchigovana mapikicha nevamwe vanhu iwe unofanirwas funga nezvekuenderana kwechigadziro chinogamuchira, saka kana nharaunda yako isina michina iyi, isu tinokuratidza maitiro ekuenderera mberi nekutora mifananidzo muJPEG fomati, fomati inogara zvakapetwa kaviri zvakapetwa seHEIF.
Kutanga tinoenda kuZvirongwa.
Mukati meMagadzirirwo tinotarisa chikamu cheKamera.
Mukati meKamera, zvisarudzo zvakasiyana umo kamera ye iPhone yedu inonyora vhidhiyo inoratidzwa, asi chinotinakidza chiri kumagumo, muFomati, chikamu chinongowanikwa chete kana tiine iPhone 7 zvichienda mberi.
Kana uchidzvanya paFomati, sarudzo mbiri dzinoratidzwa: Kubudirira Kwakanyanya kana Kwazvo Kunowirirana. Nekukanganisa, iyo Yakanyanya kushanda sarudzo inosarudzwa, iyi sarudzo ndiyo inoshandisa iyo nyowani vhidhiyo uye odhiyo compression fomati iyo inochengetedza hafu yenzvimbo. Asi kana isu tikasarudza kusave nematambudziko kana tichigovana mavhidhiyo nemifananidzo yatinoita, isu tinofanirwa kusarudza inoenderana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekutora mapikicha eJPEG neIOS 11 pane iyo nyowani HEIF fomati
Google kuvhura mukwikwidzi kuAmazon Echo Show, ine 7-inch screen